Public Kura | » कसरी थाहा पाउने खानेकुरामा मिसावट ? कसरी थाहा पाउने खानेकुरामा मिसावट ? – Public Kura
कसरी थाहा पाउने खानेकुरामा मिसावट ?
एउटा कचौरामा पानी राख्ने । त्यसमा खुर्सानीको धुलो हाल्ने । यदि पानीमा त्यो खुर्सानीको पाउडर तैरियो भने, शुद्ध हो । डुब्यो भने त्यसमा मिसावट भएको हुनसक्छ ।